Liverpool Oo Haddaba Bilawday Qorshihii Ay Kooxaha Premier Leaque Ugu Garaaci Lahayd Saxiixa Xidiga PSG Ee Julian Draxler Iyo Klopp Oo Xidigan Heli Kara Bil Kadib. – WWW.Gool24.net
Kooxda Liverpool ayaa haddaba bilawday qorshihii ay ku heli lahayd xidiga ay waqti dheer xiisaha u qabtay ee Julian Draxler iyada oo Jurgen Klopp uu diyaarsaday qaabkii uu kooxaha Premier Leaque ugu garaaci lahaa saxiixa xidiga xulka qarankiisa Germany. Draxler ayaa bishii January 2017 waxa uu ku biiray kooxda uu hadda ka niyadjabsan yahay ee PSG, laakiin sanad kadib waxa uu diyaar u yahay in uu raadsado koox kale si uu waqti uu ku ciyaaro u helo.
Wargayska L’Equipe ee dalka France ka soo baxa ayaa shaaca ka qaaday in maamulka kooxda Liverpool ay haddaba xidhiidh la sameeyeen PSG si ay marka hore Julian Draxler ugu soo qaataan heshiis amaah ah marka uu bil kadib suuqa kala iibsiga ciyaartoydu dib u furmi doono.
Liverpool ayaa doonaysa in ay ka faa’iidaysato fursad la’aanta Draxler ku haysata kooxdiisa PSG kadib markii uu kaydka u galay Neymar jr oo si buuxda ula wareegay booska uu dabiici ahaan Draxler bandhiga ugu fiican ku sameeyo ee garabka weerarka bidix.
Sidoo kale imaatinkii Klylain Mbapppe ee PSG ayaa xaalada Draxler iyo Angel Di Maria ka dhigtay mid aad u adag waxayna ka mid yihiin xidigaha ay PSG doonayso in ay kooxdeeda ka tirto si ay u raadiso lacag 80 milyan euros ah oo ay UEFA shardi kaga dhigtay in ay soo buuxiso si ay ugu hogaansanto sharciga dhaqaale wanaaga yurub.
Kooxaha Premier Leaque oo ay ugu horayso Arsenal ayaa si wayn waqti dheer u doonayay saxiixa Draxler isaga oo ka hor intii aanu PSG ku biirin bishii January ee sanadkan ay kooxaha Premier Leaque saf ugu jireen saxiixiisa laakiin hadda sida uu wargayska L’Equipe sheegayo, Liverpool ayaa xidhiidh haddaba la samaysay maamulka PSG si ay ugu horayn saxiixa Draxler ugu helaan qaab amaah ah.
Liverpool ayaa Draxler u aragta in uu badal toos ah u noqon karo Philippe Coutinho oo wali doonaya in uu Barcelona ku biiro laakiin iyada oo kooxda PSG dagaalka Coutinho dhinac kaga jirta ayay labada kooxood yeelan karaan wada xaajoodyo arimahan la xidhiidha.
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo lagu jiro xili ciyaareed uu xidig kasta oo qarankiisu u soo baxay koobka aduunku uu raadinayo in uu si joogto ah kooxdiisa ugu ciyaaro si loo soo xusho koobka aduunka ayuu Draxler soo dhawayn karaa in uu ku biiro koox uu farsad kaga heli karo xulka qarankiisa Germany ee koobka aduuka ee Russia 2018.